Gbanwee isi nkwọcha - ndụmọdụ kachasị mma | Bezzia
Ndụmọdụ bara uru iji zoo isi nkwọcha nke ị kwesịrị ịma
Susana godoy | 10/10/2021 20:00 | Mma
Ntutu isi bụ otu n'ime nsogbu ọtụtụ mmadụ na -eche ihu. Ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ nhọrọ anyị ga -enwe ike zoo nkwọcha n'ụzọ ka dị irè nakwa na ọ na -egosi ntakịrị obere. Ịhụ onwe anyị na ntutu ọzọ bụ ihe na-abawanye ùgwù onwe onye na taa anyị ga-emezu ya.
Ọ bụ ezie na alopecia na -emekarị na ha karịa n'ime ha, Ọ bụ eziokwu na enwere ike inwe ihe dị iche iche kpatara anyị ga -eji chee ya ihu. Yabụ, ọ ka mma mgbe niile ka ejidere gị na azịza ndị dị n'aka. Ị chọrọ ịma ihe ọ bụ?
1 Zoo isi nkwọcha: ịkpụ ntutu ọhụrụ
5 Ndozi ntutu
Zoo isi nkwọcha: ịkpụ ntutu ọhụrụ
Ọ bụ ezie na o yiri ka ọ na -emegiderịta, ọ bụghị nke ukwuu. N'ihi na ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ntutu isi, ọ bụ eziokwu na ọ naghị eme ebe niile oge niile. Nke a na -eme ka ụzọ mbata banyekwuo omimi ma ọ bụ ikekwe n'isi ma ọ bụ 'okpueze'. Ya mere, ọ dịghị ihe dị ka ịnwa ịme ntutu isi nke kadị bụrụ nke dabara adaba. Mbelata olu, yana akwa na bangs mgbe ọ bụla enwere ike, bụ nnukwu nhọrọ ọzọ. Olu maka ntutu dị mkpụmkpụ dịkwa mma, n'ihi na ọ ga -eme mmetụta anya ahụ inwekwu ntutu.
Karịsịa mgbe anyị na -ekwu maka ntutu dị mkpụmkpụ, nke a bụ otu n'ime azịza kacha mma. Ọ bụ otu n'ime azịza ngwa ngwa nke na -ahapụ anyị nsonaazụ dị mkpa. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ Ọ bụ ụdị ntụ ntụ nke ejiri keratin mee, nke ahụ ga -esokwa, yabụ ọ dị mfe idobe ha. Ọ bụ eziokwu na a ga -enwe ngwaahịa na -edozi, dị ka ịgba mmiri, nke ga -ahụ na ọnụnọ ha na ntutu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ikuku na -eku ikuku ma ọ bụ na ị chọrọ iyi ha ogologo oge. Ọ ka mma ịkpọtụrụ onye ọkachamara maka na ọ bụrụ na ị na -ejikwa ya ọtụtụ oge, ọ nwere ike nye gị ntutu isi gị. Ọ bụ azịza nwa oge zuru oke iji ntutu hụ gị ọzọ.
Mgbe anyị ka na -enweghị ntutu isi pụtara nke ọma, anyị nwere ike iji ndọtị mgbe niile. Karịsịa n'ihi na ha dị mma ka ha nwee ike zoo ntutu kacha mma wee nye ya ihe okike na oke ọkụ, dịka anyị si amasị ya. Dịka ị maara nke ọma, enwere ọtụtụ ụdị ndọtị ị nwere ike ịchọta. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike eyi ogologo oge na ndị ọzọ ga -eyi ma ọ bụ wepu ya na ụdị ịkpụ ntutu.
N'ikwu okwu sara mbara, ọ bụ eziokwu na a na-eji ihe a na-akpọ micro-line iji nye mmetụ olu n'isi elu. Ka ọ ghara ịhụ anya na ntutu na -efu. Ebe ọ bụ na nke a bụkwa ebumnuche nhọrọ dị ka nke anyị na -ekwu maka ya n'oge a. Na mgbakwunye na izopu nkwọcha, anyị ga -ekwukwa na ị nwere ike iyi ya maka izu ma ọ bụ ọnwa, yabụ na ọ bụ otu n'ime nnukwu uru ya karịa ihe ngwọta ndị ọzọ. Iji mee nke a, ị kwesịrị ịjụ n'ụlọ ebe ị na -achọ mma, ị ga -enweta nsonaazụ ya n'ihi na ọbụnadị ikuku agaghị enwe ike iso ya.
Naanị maka oge a kapịrị ọnụ, anyị nwere etemeete ntutu. Nke a na -eme ka o zuo oke izobe 'okpueze' ahụ ma ọ bụ mee ka mgbọrọgwụ gbasapụ ntakịrị, nke na -eduga anyị ịhụ onwe anyị nwere ntutu karịa ma ọ bụ ka ọ dịrị gị mma isi nkwọcha. Taa, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ, site na ndị etinyere ya na mmiri mmiri dị ka a ga -asị na ọ bụ etemeete ihu, ka ọ gwụchaa. Enwere ndo niile, yabụ na ọ naghị esiri ike ịhọrọ nke gị, a na -erekwa ha na ụlọ ahịa, yana akwa. Kedu nhọrọ ị ga -ahọrọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Ndụmọdụ bara uru iji zoo isi nkwọcha nke ị kwesịrị ịma